Michael Keating “Xildhibaanada waxay heystaan fursad ay ku muujin karaan hoggaan suuban..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Michael Keating “Xildhibaanada waxay heystaan fursad ay ku muujin karaan hoggaan suuban..”
Beesha caalamka ayaa war-cad kasoo saartay doorashada guddoonka Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalintii shalay lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
War-qoraal ah oo ay si wadajir ah usoo saareen Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Itoobiya, Italy, Sweden, UK iyo Mareykanka ayaa marka hore loogu hambalyeeyay doorashada ay xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka ku doorteen guddoonkooda.
Beesha caalamka ayaa qoraalka ay soo saareen sidoo kale ku sheegtay in tallaabadaan ay haatan soo af-jareeyso wejigii ugu muhiimsamaa geedi socodka doorashada dalka Soomaaliya, iyagoona ku baaqay in si deg-deg ah loo sameeyo guddi wadajir ah oo ka shaqeeya doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Sidoo kale, beesha caalamka ayaa ugu baaqay labad gole inay xiriir wada shaqeyn oo wanaagsan la yeeshaan golaha fullinta, si looga gudbo xaaladda adag ee ay Soomaaliya ku jirto.
Dhinaca kale, Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in xilligaan Soomaaliya ay wajaheeyso xaalado adag, islamarkaana fursadda ay heystaan xildhibaanada uga faa’ideeyaan inay soo doortaan hoggaan fiican oo Soomaaliya ka bixin kara xaaladahaasi adag.
“Soomaaliya xilligaan waxay wajaheeysaa xaalado adag oo isugu jira abaaro, shaqo la’aan iyo nabad-gelyo darro, xildhibaanada waxay heystaan fursad ay ku muujin karaan hoggaan suuban oo ka jawaabi kara baahida asaasiga ah ee shacabka..” Sidaas waxaa yiri Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating.
Ugu dambeyntii, labada gole ayaa lagu wadaa in kulankoodi ugu horeeya ay si wadajir ah ku dhisaan guddi wadajir ah oo qabta doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, taas oo lagu wado inay dalka ka dhacdo bilawga bisha soo socoto ee Febraayo.